Wararka ECommerce waa degel diiradda saaraya keenista wararkii ugu dambeeyay iyo tilmaamaha adduunka ganacsiga elektaroonigga ah ee loogu talagalay maraakiibta. Waxaa la aasaasey sanadkii 2013, waqti kooban gudahood waxay horeyba u aasaastay a tixraaca qaybtaada, badanaa waxaa iska leh kooxda tafatirayaasha, oo aad ka hubin karto halkan.
Hadaad rabto inaad aragto liiska mawduucyada in aan wax ka qabanay goobta, waad booqan kartaa qaybta qaybta.
Haddii aad rabto nala shaqee, dhameystiran foomkan waana kula soo xiriiri doonaa sida ugu dhakhsaha badan.
Waan jeclahay suuqgeynta iyo farsamooyinka si loo hagaajiyo dukaamada internetka ama eCommerce. Sidaa darteed, waxaan la wadaagayaa aqoonteyda mowduucyo xiiso u yeelan kara akhristayaasha, ama sababtoo ah waxay leeyihiin dukaan internetka ah ama astaan ​​shaqsiyeed.
Aad u xiiso badan oo ku saabsan tignoolajiyada iyo ganacsiga ecommerce. Macaamiisha dhammaan noocyada alaabada khadka tooska ah, iyo khibrad u leh abuurista dukaamada khadka ee leh aalado ay ka mid yihiin PrestaShop iyo kuwa la midka ah. Had iyo jeer isku day inaad la socoto wax kasta oo la xiriira adduunkan.
Dibloomada Sayniska Ganacsiga, ee qaybta Suuqgeynta, Xayeysiinta iyo Suuqgeynta, kuna dhex milmay adduunka wararka, dhammaan aagagga laga bilaabo teknoolojiyada cusub illaa ogaanshaha, takhasuslaha maaliyadda, Forex, lacagaha, Suuqa saamiyada, maalgashiga iyo wararka lacagaha, laakiin inta badan jecel suuqyada caalamiga ah iyo kuwa caalamiga ah, iskudhafka aasaasiga ah si loo helo loona gaarsiiyo wararka ugu fiican iyo talobixinta akhristayaasha maaliyadeed.
Dareenka qaybta internetka, maaddaama ay ku jirto dhammaan macaamillada lacageed ee aan sameyno. Sidaa darteed, wax kafiican isha ku haynta wararka ugu dambeeya ee ganacsiga elektarooniga ah.